20 Google Hadda Talooyin iyo tabaha in aad u
Google Hadda ( http://www.google.com/landing/now/ ) hadda waa app loo isticmaalo. Waxaad ogaan by hadda in Google Haatan waxaa la dhisay iyaga oo raadinaya Google. Google oo soo bandhigtay updates ee Google Hadda si dhakhso ah. Waxay ku saabsan tahay 2 sano tan iyo Google ayaa ku soo bilowday safarka iyo waxay ku sii dayn karaa ilaa iyo haatan u cusbooneysiin. Update oo dhan uu leeyahay qamaar cayayaanka iyo fulinta. Iyadoo Google Hadda, waxaad samayn doontaan goobid cod u ciyaaro multimedia, fariimo, baadi internetka, wacaya qof, beddelin. Kuwani waa walax Ciyaalle aannu ku samayn lahayn in aannu nolol maalmeedka.
Si kastaba ha ahaatee, ma waxaad ogahay inaad wax badan oo dheeraad ah la Google samayn kartaa Hadda? La hubiyo in ka badan aqlabiyadda tirada guud ee user Google Oo haatan ha u isticmaalin Leexin Kalimooyinka Meelahooda sare ee Google Anigu hadda waan ahay. Haddaba waa dhibcood ka yimaado. Maanta waxaan qaar Talooyin iyo tabaha Google ee aad hadda ku tusi doonaa. Marka waxaan idinku leeyahay qaar ka mid ah ka dibna dhowr kaliya macnaheedu (kiiskan waa 20) iyaga ka mid ah, maxaa yeelay, waxaan xitaa ma garanayo waxa tirada dhabta ah ee talaabo aan samayn kartaa la Google Hadda. Waxaa dhici karta 100 ama waxaa laga yaabaa in ka badan in. Ha ka heli soo dhex galay qoto dheer oo Google Hadda Talooyin iyo tabaha.
1. Google Hadda Research Mawduuca
Dhammaan baaritaan aad samayn on Google Hadda la ganaax-soco doonaa oo aruurshey dhaadhaco mawduucan cilmi ku salaysan yahay su'aalo aad goobidda iyo xiriir aad guji galay. Si aad u ogaato waxa aad baaritaan ee la soo dhaafay ku dhawaad ​​iilan, hubi mowduucyo cilmi-aad halkan. Your search wada muuqan doonaa waxyaabaha kale ee la midka ah oo la gelin doono sida qaybaha. Qeybaha in ay diyaar u yihiin dib u eegidda, Forums, Videos, Content Fresh, Music, TV muujinaysaa, Dadka iyo shabakadaha.
2. dhimo Sharing
Haddii sabab uun aad u baahan tahay meel aad la yaqaan oo ay idinkaa iska leh saaxiibbo ama qaraabo on Google Plus, waxaad awood karaa Location Sharing dhaxeeya goobo (s) iyo aad. Wixii tilmaamo faahfaahsan fadlan booqo halkan. Waxa ka muhiimsan, sidoo kale Sharing dhimo ee Google waxaad awood karaa Now. Maxay waxan kuu samayn karaa? Waa hagaag, haddii aad ku nooshahay magaalada halkaas oo saxmadda baabuurta iyo burbur ah gaadiidka dadweynaha waa wax caadi ah, waxay kaa caawin doonaa qoyskaaga iyo kuwa jecel in ay la socdaan meesha aad joogto ee aad ka dhimo dambeeyay. Sahlo this by socda: Google Hadda> Settings> Xisaabaadka iyo Privacy> ha arko updates dhimo aad.
3. Personal Photo Search
Haddii aad u geliyaan sawiro maalin walba in aad xisaabta Google+ markaas Google Hadda waxay kaa caawin kartaa si aad u ogaato sawirada aad raadinayso. Tusaale, waxaad ku odhan "photos aan guriga" ka dibna aad la soo bandhigi doonaa natiijada oo ka mid ah sawirada aad qaadatay ee gurigaaga. Tani waxay ka caawisaa badan marka aad leedahay sawiro badan.
Waxaad isticmaali kartaa calculator online bixiyaan Google iska dheh "calc". Waxaad arki doontaa wax calculator cabsi soo shaashadda. On calculator in aad xisaabi kartaa summation, isku dhufasho, kala qeybinta iyo wixii la mid ah.
5. debecsan Voice Command
Marka aad qabtid Google Hadda fur aad si fudud u dhihi karaa "Google" + sida aad doonayso inaad raadinta amarka. Tusaale ahaan si ay ugu yeedhaan qof "Mohit". Just la yidhaahdo "Google wac Mohit". Markaas Waxaa wici doonaa Mohit.
6. waqtiga iyo taariikhda su'aal
Waxaad si fudud u raadin karo oo ku saabsan waqtiga iyo taariikhda meel kasta oo adduunka ah. Tan waxaa ku jira waqti, zone mar, sunrise, qorrax iyo taariikhda dabcan. Tusaale ahaan in la ogaado oo ku saabsan taariikhda ee Kanada kaliya dhihi "waa maxay taariikhda ee Kanada". Waxaa idin tusin doonaa markii ugu hadda ka jirta Canada. Sidoo kale waxaad ka raadin kartaa waqti zone, qorrax iyo Subaxba.
7. Maps Navigation
User raadin kartaa khariidad ee magaalo gaar ah oo adduunka ah. Magaalo kasta oo adduunka ah waa la heli karaa. Tusaale ahaan odhan "map Google ee Washington DC". Waxaad la soo bandhigi doonaa map-ka ee Washington DC. On the user kale gacanta ka raadin kartaa meel fog ka mid magaalo ilaa magaalo kale. Tusaale ahaan haddii aad weydiisato "Google sida fog yahay Washington DC ka Canada". Waxaad arki doontaa natiijada ee miles.
8. Web Utility
Ma waxaad isweyddiinaysaan haddii aad ka arki kartaa bogagga internetka iyadoo la kaashanayo ee Google Hadda? Haa. Waxaad isticmaalaysa kartaa internetka isticmaalaya Google Hadda. Tusaale ahaan si ay u tagaan website odhan "Google furo facebook.com". Waxa aad la isugeeyey in website-ka Facebook la isticmaali karaa "I tus" keyword sidoo.
9. Google Hadda Bluetooth
Waxaad ku xidhi kartaa headset Bluetooth la Google Hadda. Haddii aad qabto headset Bluetooth ku xiran telefoonka ah android, waxa ay si toos ah u furi doonaa "Voice Dialer" hawsha. Tani waa anfacaya haddii oo dhan aad rabto in aad samayso waa wac qof, si kastaba ha ahaatee waxa ay u qaban karo si ka badan si fudud iyadoo la isticmaalayo Hadda halkii Google. Google Waxaas oo dhan ka shaqeynayaan ee dialer codka, wax badan oo dheeraad ah. Si aad u awood kaliya hubi Settings ikhtiyaarka> headset Voice> Bluetooth.
10. Delete Google Hadda Search Taariikhda
Waxaad tirtiri kartaa Google Hadda baadhaan taariikhda. Laga soo bilaabo qalab aad ka tago in goobaha> Accounts & Privacy> Web History (dami). Hadda waxa laga bilaabo taariikhda aan la diiwaan. Si aad u tirtirto taariikhda oo dhan guji halkan .
Google Hadda waxaa loo isticmaali karaa wararka cimilada. Si aad u ogaato in aad cimilada magaalada ama cimilada ee dalka ka mid ah ama magaalada ee adduunka. Eeg tusaalahan: dhahdaa "Ma Roob baa soo socda ee Dhaka" Waxaa hadda idin tusiyo cimilada news dhameystiran. Sidoo kale waxaa suurto gal ah in la helo cimilada ee "China" ama cimilada ee magaalada gaar ah oo Shiinaha.
12. Google Hadda toobiye
Waxaad Google Hadda toobiye kartaa screen guriga haddii aad leedahay mid ka mid ah qalabka hoos ku qoran.
Nexus 4/5/7 iyo wax kasta oo kale oo edition Google play. Just download Google Hadda launcher oo jiidi screen guriga. Hadda waxaad haysataa Google Hadda toobiye.
13. Battery dheecaan ka Issue
Dad badan ayaa waxay soo sheegeen in Google Haatan waxaa dheecaan ay batteriga. Si loo xaliyo arintan fadlan raac this: Tag goobaha> Accounts & Privacy> goobaha Google goobta> Dami GPS iyo demi taariikhda Web ah. Tani waxay dheerayn doontaa nolosha batteriga.
14. Sports Lovers
Sports lover natiijada iyadoo la kaashanayo Google arki kartaa Hadda. Tusaale ahaan in la ogaado natiijada FIFA koobka aduunka kaliya si fudud u oran "Yaa ku guuleystay kulankii u dhexeeyey Argentina iyo Germany". Waxaad scoreboard a yimaado doonaa natiijada. Waxa kale oo aad ka arki kartaa jadwalka by leh jadwal "ee FIFA 2014"
15. Conversion Utility
Waxaad u bedeli karaan qiimaha kasta oo ka mid ah miisaanka qiyaasta kale. Dhinaca kale garan kartaa qiimaha joogto ah sida Fiihaahiirod, li'idiisa iyo waxyaalo badan oo kale. Tusaale ahaan in la ogaado qiimaha Pi (Just dhihi "Waa maxay qiimaha Pi") oo halkaas waxaad arki natiijada.
16. Music iyo Movie
Google Hadda isticmaala marin kartaa heeso iyo filimaan cod amarka. Si aad u hesho music kaliya waxaad dhahdaa "Google ciyaaro" magaca music ah ". Markaas waxaa la ciyaari doonaa music ah.
Tani waa muujinta weyn ee Google Haddaba markii aad rabto in aad wax ku saabsan warbaahinta film og. Tusaale ahaan haddii aad rabto in aad ogaato oo ku dhaqmay filimka "X-nin oo" .Waxa aad u baahan tahay oo kaliya in la yidhaahdo "Yaa ku dhaqmay X-nin". Markaasaad arki natiijada baxey ka Wikipedia iyo ilaha kale ee la xiriira.
Talooyin 18: Email SMS Call: Tani waa wax caadi ah in qof kasta. Tani waxaa lagu yaqaan qof kasta isticmaali Google Hadda. Yeedhayso ujeedooyin aad u baahan tahay in la yidhaahdo "Wac John".
Si aad SMS diri iska dheh "dir John" Si aad u soo diri email dhihi "Email si dummy@gmail.com Message Test Subject: H tani waa baaritaan masaasad "
18. Change "OK Google Hadda" in ay wax ka duwan
Ku daalay isticmaalaya "OK, Google Hadda"? Waa hagaag, waxaad bedeli kartaa amarka in ay wax ka duwan. Iyadoo qaar ka mid ah phone Motorola, waxaad bedeli kartaa "OK, Google hadda" dadka kale, sida "OK, qoslid Hadda", Yo Google Hadda. Haddii aadan haysan telefoonka Motorola, waxaad u tagi kartaa si fur Mic + inay wax ka bedesho amarka on telefoonada aan Motorola
19. Advanced Search:
Waxaad ka raadsan kartaa su'aalo aad codkaaga. Just dhihi raadinta sida aad doonayso inaad su'aalo si toos ah idinka soo bixin doonaa warbixinta laga helay ilo kala duwan oo aad u baahan tahay. Tusaale ahaan "waa maxay android" "Author ee Harry Potter" iyo waxyaabo badan oo aad dhab ahaan u samayn karaa.
20 Easter Egg
Google Hadda ayaa ka buuxda ukunta Easter waa in. Isku day inaad soo socda iyo ogaato.
Markii aan ahay?
"Aniga rooti samee"
Waa maxay tirada loneliest?
10 Apps Camera Best u Android
> Resource > Android > 20 Google Hadda Talooyin iyo tabaha in aad u